​राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नयाँ सीइओ श्रेष्ठले गरे पदभार ग्रहण
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सीइओका लागि मुख्य दाबेदार रहेका कृष्ण आचार्यको नियुक्त नभएपछि आइतबारदेखि श्रेष्ठको वाणिज्य बैंकको सीइओमा..
​यती डेभलपमेन्ट बैंकले दियो २५ हजार बराबरको छात्रबृति
काठमाडौं । यती डेभलपमेन्ट बैंकले चितवनका भिमोदय उच्च माध्यमिक बिद्यालयलाई पच्चिस हजार रुपैयाको छात्रबृत्ती प्रदान गरेको छ । बैंकले सामाजीक उत्तरदायित्व अन्तरर्गत उक्त विद्यालयको ४५ औ बार्षिक उत्सबको अवसर पारी गरिब..
एसबिआई बैंक औद्योगिक शान्ति पुरस्कारद्धारा पुरस्कृत
काठमाडौं। नेपाल एसबिआई बैंक औद्योगिक शान्ति पुरस्कार २०७२ बाट सम्मानित भएको छ । स्वच्छ औद्योगिक सम्बन्ध एवं मानव संसाधन (एचआर) अभ्यास र व्यवस्थापन सुधारको स्तर मुल्यांकनका आधारमा निजी तथा सार्वजनिक..
​युनाइटेड इन्स्योरेन्सले लगानीकर्तालाई २० प्रतिसत बोनस दिने, चुक्ता पुँजी ३० करोड २० लाख पुग्ने
काठमाडौं । युनाइटेड इन्स्योरेन्सले लगानीकर्तालाई २० प्रतिसत बोनस सेयर दिने भएको छ । यो इन्स्योरेन्सको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २० प्रतिसत बोनस र कर प्रयोजनका लागि १४ लाख ४३..
​मेगा बैंक र भारतको एस बैंकबीच रेमिट सम्झौता, ११ हजार वटा एजेन्टहरुबाट सिधै नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन सकिने
काठमाडौं । भारतमा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेशमा सहज रुपमा रेमिट्यान्स पठाउन मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले भारतको एस बैंकसँग रेमिट्यान्स सम्झौता गरेको छ। सम्झौता पत्रमा मेगा बैंकका चिफ बिजनेश अफिसर रबिना देशराज श्रेष्ठ..
हिमालयन बैंकले शेयरधनीका लागि ६५ लाख कित्ता शेयर निष्काशनको प्रक्रिया अघि बढायो
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले हकप्रद शेयर निष्काशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जसका लागि बैंकले लक्ष्मी क्यापिटललाई शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । बैंक र क्यापिटलबीच बुधवार सम्झौता..
​तपाईसँग कृषि विकास बैंकको शेयर छ, र बोनस शेयर तथा नगद लाभांस लिनुभएको छैन भने यसो गर्नुहोस !
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको बोनस तथा लाभांस एक पटक पनि संकलन नगरेका शेयरधनीहरुलाई बोनस संकलन गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ । बैंकको शेयर निष्काशन तथा बिक्रि प्रबन्धक एस क्यापिटलले यस..
​मेगा र पश्चिमाञ्चल बैंक गाभिने, राष्ट्र बैंकले दियो अन्तिम स्वीकृति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मेगा बैंक र पश्चिमाञ्चल विकास बैंकलाई मर्जरको लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिले बैठकले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको..
​स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एनसीसीबीच डिजिटल सिग्नेचर प्रदान गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड र नेपाल सर्टिफाइङ्ग कम्पनी(एनसीसी) बीच डिजिटल सिग्नेचर तथा सर्टिफिकेट (डिएससी) प्रदान गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट बाणिज्य बैंकिङ्ग एवं अन्तर्रािष्ट्रय ग्राहक..
​हिमालयन बैंक र शिखर इन्स्योरेन्सबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । हिमालयन बैंक र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकासुरेन्स सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । यस सम्झौताअनुसार हिमालयन बैंकले शिखर इन्स्योरेन्सको कर्पोरेट एजेन्टको रुपमा निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान..
९ करोड कर्जा लिई ठगी गर्ने पुष्करराज खड्का पक्राउ
काठमाडौं । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबाट ९ करोड कर्जा लिई ठगी गर्ने पक्राउ परेका छन् । पारिवारिक हाउजिङ डेभलपमेन्ट प्रालि नामक कम्पनी खडा गरी ठगी गरेका ४७..
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी एनसीएचएल प्रणालीको सञ्जाल बिस्तारको क्रममा नेपाल क्लियरिंग हाउस र..
​बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि ग्लोबल आइएमइले ल्यायो ‘रेमिट्यान्स बचत खाता’
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले बिदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई बचतमा परिणत गर्न ‘रेमिट्यान्स बचत खाता’ खोल्ने योजना ल्याएको छ । आर्कषक बिशेषता रहेको खाता अन्र्तगत बिदेशबाट पठाएको रकम ग्राहकले ग्लोबल आइएमई बैंकमा..
​राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिइओमा किरण श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा किरणकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। आइतबार बसेको वाणिज्य बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले छनौट समितिले सिफारिस गरेका कृष्णप्रसाद आचार्य, अनिल उपाध्याय..
ओम फाइनान्स र सिटी डेभलपमेन्ट मर्जभई ओम डेभलपमेन्ट बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु
काठमाडौं । पोखरामा मुख्य कार्यालय रहेका ओम फाइनान्स र सिटी डेभलपमेन्ट बैंक एकआपसमा गाभिएका छन् । मर्जरपश्चात ओम डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा सोमबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको बैंकका डेपुटी सीइओ बुद्धि..
कृषि विकास बैंकको १५ प्रतिशत बोनस र ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर स्वीकृत
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले आगामी बैंशाख १४ गते साधारणसभा बोलाएको छ । बैकले प्रस्ताव गरेको लाभांश तथा हकप्रद शेयर वितरणका लागि राष्ट्र बैकले स्वीकृति दिएपछि बैकले उक्त प्रस्ताव पारित..
​लक्ष्मी बैङ्क १५ औं वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । लक्ष्मी बैङ्कले आफ्नो कार्यकालको १४ वर्ष पुरा गरी १५ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् २००२ मा स्थापना भएको बैङकले बृहत् जनस्तरमा बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्न सफल भएको..
एनआईडीसी बैंङ्क एनसीएचएल–आईपीएसमा आबद्ध
काठमाडौं । एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंङ्क अन्तरबैंङ्क विद्युतिय भुक्तानी प्रणली (एनसीएचएल–आईपीएस)मा आबद्ध भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस र बैंङ्कबीच उक्त प्रणली शुरु गर्ने सम्बन्धमा बुधबार सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल..
आईएमई–क्योदाईको उपहार योजना, नेपाल-जापान राउन्ड ट्रिप टिकेट
काठमाडौं । आईएमई लिमिटेडले क्योदाई रेमिटेन्स जापानसँगको सहकार्यमा नयाँ वर्ष २०७३ को उपलक्ष्यमा उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ । आफ्ना सेवाग्राहीहरुका लागि यो कम्पनीले तीन महिने योजना सार्वजनिक गरेको हो..
​प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ३० प्रतिशत बोनस सेयर साधारण सभाबाट पारित
काठमाडौं । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको बुधबार सम्पन्न २२औं साधारण सभाले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत बोनस दिने सञ्चालक समितिको प्रस्ताब पारित गरेको छ । त्यसैगरी साधारणसभाले बोनस सेयरको कर प्रयोजनका लागि..
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, १० प्रतिशत एफपिओ पनि जारी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयसधनीलाई आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको मंगलबार बसेको २१७औं सञ्चालक समितिको बैठकले २५..
​जनता बैंकले काठमाडौं कुलेश्वरमा शाखा खोल्यो, शाखा संख्या ३६ पुग्यो
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले काठमाडौंको कुलेश्वरमा आफ्नो ३६औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकको कुलेश्वर शाखाको उद्घाटन व्यवस्थापिका संसदका सांसद एवम् सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठले गरे । बैंकले..
साढे ४८ हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दै झिमरुक विकास बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ख वर्गको इजाजपत पत्र प्राप्त गरेको झिमरुक विकास बैंकले आफ्ना शेयरधनीलाई १० बराबर १ अर्थात १० प्रतिशतका दरले हकप्रद शेयर जारी गरेको छ । बैंकले..
लक्ष्मी बैंक सुर्खेत र महेन्द्रनगरमा, देशभर ४९ शाखा पुग्यो, अझै शाखा विस्तार गर्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले मध्यपश्चिमको सुर्खेत र सुदुर पश्चिमको महेन्द्रनगरमा एकपटक दुई शाखा संचालनमा ल्याएकोे छ । नयाँ शाखा विस्तारसँगै बैंकको शाखा संख्या ४९ पुगेको छ । बैंकले शहरी तथा..
​इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकको २७ प्रतिशत बोनस पारित
काठमाडौं । इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकको सोमबार भैरहवामा सम्पन्न छैटौं वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७१-७२ को नाफाबाट शेयरधनीलाई २७ प्रतिशत बोनस शेयर तथा कर प्रयोजनका लागि १.४२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न..
​लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनीको २१ प्रतिशत बोनस पारित
काठमाडौं । लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनीले गतआर्थिक बर्षको मुनाफाबाट २१.६१८ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि १.१४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लगेको थियो । सोमबार सम्पन्न..
​सोलुखुम्बु र ओखलढुंगामा एनबी इन्स्योरेन्सले खोल्यो कृषिको कारोबार गर्ने शाखा
काठमाडौं । एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीले नियामक बीमा समितिबाट तोकिएबमोजिम कृषि तथा पशु बीमाको कारोबार गर्ने उद्देश्यले सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा १२औं र ओखलढुंगाको हुलाकडांडामा १३ औं शाखा खोलेको छ । उक्त शाखाहरुको..
​सोलुखुम्बुमा पहिलोपटक विद्युतीय बैंकिङ सेवा
सोलुखुम्बु । हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा पहिलोपटक विद्युतीय बैंकिङ सेवा सुरु भएको छ । कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय सल्लेरीले विद्युतीय सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ । सोलुखुम्बुमा कृषि विकास, वाणिज्य,..
​बिराटलक्ष्मीले नेरुडे लघुवित्तको ३ लाख १५ हजार कित्ता सेयर बेच्दै
काठमाडौं । मोरङको बिराटनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको बिराटलक्ष्मी विकास बैंकले नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकमा रहेको ३ लाख १५ हजार कित्ता सेयर बेच्ने भएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेयर बिक्रीका..
​नेको इन्स्योरेन्सको १०० प्रतिशत हकप्रदको प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सको साधारणसभाले वोनस सेयर दिन् प्रस्ताव पारित गर्दै हकप्रद सेयरलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । सभाले १५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले..
Results 1896: You are at page 39 of 64